CAJALADU MA DHABA MISE WAA DHOOBDHOOB?
SC: Salaanta islaamka ka dib beryahan marka maqaal la akhriyayo qofka akhriyaya waxuu iska mala awaala halkaasu ayu ka so jeeda qorahu. Markaas aan is cadeeyo waxaan ahay nin rer somaliland ah oo waliba Habraha ah (Kaftan!!)
Intaas hadaan ku dhaafo halkaas ,cajaladan waxaan daawaday xiligi iigu horaysay iyadoo aan afuri doono xiliga Australia ,markaan daawaday afurkii waan cuni kari wayay siday i damaqday. Waxa la yidhi Geeriyi geel jire iyo ninmaanad aqoon ayay ku wacnayde, Ilaahay ha xafidee Sheekh Maxamed Ismaaciil waxuu aha nin aanu Jaar nahay Hargeysa From 2000-2005 aanan aqaano lafahiisa cadcad, Isla markiiba 1000% waxaan xaqiiqsaday inuu isagii yahay anigo aqaan Muqaalkiisa si fiican, Codkiisa oo hadi laygu dhex daro 100 nin aan ka so saari karo iyo waliba Body Languagekiisa oon si fiican u aqaano aya i samaxday inaan wax yar oo shakiyi qalbigayga galin inuu isagi yahay iyo in kale cadayna haba yaraate aanan cid uga baahan.
Hagaag markaan xaqiiqsaday inuu isagi yahay waxaan is waydiiyay Suaalahan ayna noqatay inaan so baadho
1- Why nin la jidh dilayo cajalad looga duubay?
Jawaabteeda waxa la leyahay waxa loo duubay Ethiopianka si loo tuso loona dhaho Big fish ayaan
Qabanay eegana sidaan u galayno.
2- Maxay markii ugu horaysay u so qori wayeen Webabka Rer Somaliland mala waa Propoganda iyo wax laga soo abuuray meel kale ?
Waxa lay shegay inay diden sidaasna lagu so saray Webka laascaanood
3- Ma noqon karta cajaladu mid la isu geegeyay sida dad badani qabaan?
Jawaab :-Maya ma noqon karto waayo codkii iyo Body languageki iyo Muqaalkiiba waa kii Sh Maxamed xage wax la isaga gayn karaa. Dadka aan la hadalay oo dhan ee reer Hargeysana wax yar oo shakiyi kuma jiraan. Waxaan aad uga helay Lawyerka Sheekha oo yidhi Nabi Maxamed Cs ayay Qurayshi ku tidhi waa Gabay quraanku, deedna u ku yidhi Cs " 10 aayadood oo la mida so saara hadu Gabay Yahay Quraanku" Ee bal mid la mida soo saara oo keena cid kasta adeegsadoo.
3- Ma noqon karta Cajaladu mid lagu duubay Jeelka dhexdiisa?
Maya oo kama suuroowdo sheekhu fal been abuura oo sidaas u wayn o ku so noqon doona inuu
faraha la galay oo sumcadiisa iyo sheekhnimadiisa dhaawici kara kana dhigi kara Fidno wale iyo Beenaale hadaan anigu aqaano Sh maxamed wax ka suuroobi kara iyana maha
GeboGabo:- Cajaladan fikirkayga yar 100% waa Mid Jirta. Kuwa shakisan xaqiiqdeedana kolay waxa ay ku rumaystaan way arki dhowaan inshalaah. Markaad wadanki la hadalaysana dadka aan
Xag jirin la hadla ee dhexdhexaadka si aad u heshaan jawaab dhexdhexaad ah.
Amal Sheekh Max’ed Ismaciil “Aabbahay wuxuu u xiran yahay.”
Amal Sheekh Max’ed Ismaaciil oo uu dhalay Sheekh Max’ed Ismaaciil oo ah Sheekh ku xiran Xabsiga Magaalada Hargeysa dhawaana Web-Site-yada caalamka laga daawaday iyada oo ay jir dilayaan ciidamo ka tirsan maamulka Daahir Riyaale ayaa waxa ay xariga Aabbaheed ku tilmaantay mid xaqdaro ah.
“Aabbahay waxa uu u xiran yahay maxaad u fidineysaa diinta Islaamka oo aad uga soo horjeedaa Itoobiya iyo Mareykanka” ayey tiri Amal oo markii la wareysaney ilmeyneysay taas oo dadka Soomaaliyeed aad uga jariiracoodeen, waxayna ummadda Soomaaliyeed ka codsatay sii loo siideyn lahaa Aababbaheed. Amal waxa ay sheegtay in Aabaheed uu u shaqeynayay carruur fara badan kuwaas oo ku nool dalka Gudihiisa iyo dibaddiisa.
E-Mail : amiinkhasaaro@hotmail.com